Maxay Shacabka Soomaaliyeed uga dhigantahay guusha Farmaajo | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Wararka Maanta Maxay Shacabka Soomaaliyeed uga dhigantahay guusha Farmaajo
Maxay Shacabka Soomaaliyeed uga dhigantahay guusha Farmaajo
Maxamed Cabdulaahi Maxamed “Farmaajo” dhashay 1962 kuna dhashay Muqdisho, Soomaaliya) waa Soomaali diblomasi, borofasoor iyo siyaasi isku ah noqdayna Madaxweynihii9aad ee Jamhuuriyadda [[Soomaaliya] laga sii bilaabo 8 Febraayo 2017.
Wuxuu soo noqday Ra’iisul wasaarihii Soomaaliya laga soo bilaabo Nofeembar 2010 ilaa Juun 2011.
Wuxuu waxbarashadiisa aasaasiga ku qaatay magaalada Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya.
Farmaajo ayaa ku guuleystay xilka Madaxweynaha Soomaaliya 8 Febraayo, kaddib doorasho adag oo uu la galay Labo Madaxweynayaal hore oo uu kula tartamay wareegga labaad ee doorashada.
Madaxwayne Farmaajo ayaa wareega labaad helay codod badan oo gaarayay 184 cod taasoo keentay in Musharaxii ku xigay ee Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu tanaasulo.
Shaqooyinkii kale ee uu soo qabtay.
1981: Waxaa uu shaqo ka bilaabay Wasaaradda arrimaha dibadda, waaxda lacagta, Maamulka iyo Arkiifiyada.
1985-1989: Xogheyaha 2-aad ee Safaaradda Soomaalida ee Washington.
2000: Golaha dhexe ee xisbiga Jamhuuriga ee dalka Mareykanka.
2002:Xiriiriyaha State of New York ee arrimaha xuquuqul Insaanka iyo dadka laga tirada badan yahay
2015: waxaa uu Bare ka yahay Erie College oo ku yaalla buffalo.
Haddaba guusha madaxwaynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxay uga dhigantahay Shacabka Soomaaliyeed.
Shacabka Soomaaliyeed ayaa xalay waxay u ahayd mid ka mid ah ciidihii iyo farxadihii dalka soo maray.
Markii Farmaajo uu Xasan Sheekh ka horeeyay codad 50 meeyo gaaraya Magaalada Muqdisho waxaa ka bilowday dabaal-deg aan la arkin tan iyo soo shaac bixitaankii dowladdii Maxamed Siyaad Barre.
Dabaal-degga waxaa bilaabay ciidanka dowladda gaar ahaan kuwii ilaalada ka haayay xarunta Afasiyooni oo doorashada madaxwaynaha ka dhacaysay.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxwaynaha Soomaaliya ayaa markii xilka Ra’iisul wasaaraha waayay muddo kooban waxaa uu badelay Soomaaliya. Waxaa uu bilaabay inuu dhiso ciidanka qaran isagoo u balan-qaaday xuquuq iyo mushaaraad joogta ah. Ayadoo dalka xiligaasi uu Ku jiray marxalad adag ayaa Farmaajo waxaa uu mushaaraadka ciidanka iyo Shaqaalaha dowladda Ku maareeyay lacagihii dowladda uga soo xaroonayay dekadda iyo garoonka Aadan Cadde ee Muqdisho.
Mid ka mid ciidanka dowladda oo la yirahdo Xuseen Sheekh ayaa waxaa uu ii sheegay in markii Farmaajo uu Ra’iisul wasaaraha ahaa ciidanka ay haysteen dhiiro-galin badan iyo in Maalin walba qaybta isaga ka tirsanaa ay cuni jireen hal geel ah.
Caqabadaha Farmaajo uu wajahay waxaa ka mid ahaa heshiiskii loogu magac daray Kampala a cord kaasi oo Farmaajo xilka uu laga tagay.
suurtagal matahay in in madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo fahamsan yahay sida bulshadu loo jiheeyo isgoo ku xulaya qof walba aqoonta uu u leeyahay hawsha loo diray
waxaa loobaahan yahay in uu si fiican u fahmo soomaalidu maxay u taqaan iskutashi waa inuu si caqli ku dhisan kula dhaqmaa dalalka deriska ah waa inuu ogaadaa wadamada dariska soomaali badan ayaa ku nool oo ka tirsan xukumadaha wadamadaas, waa inuu ilaaliyaa soomaalidaa kunool iyo qaxootiga ku nool danahooda iyo xuquuq dooda
waa inuu dhibaatooyinka jira ee haysta bulshada sida arrimaha abaarraha, barakaca ama xitaa musiibooyinka kale shaqo la’aanta dhalin yarada waa dhib ka jira qaarada afrika oo dhan waa in uu u helaa qorsha qaran oo loo marayo in bulshadu u midowdaa
Iyadoo si cimi Baarisku ku dhisan looga baxo dhibaatooyinkaa bulshada Haysta
waa in uu iska ilaaliyaa dhaqanka jaahilnimada ee lagu bartay madaxda soomaalida intooda badan taas oo ah islaweyni aan caqli ku dhisnayn iyo in uu koox yar wax ka maqlo oo waa in uu shacabka oo dhan wax ka maqlaa gaar ahaan saxaafada iyo dadka wax garadka.
waa inuu dhismaha ciidamada u maraa heshiis bulsho oo ku dhisan in saraakiisha ciidanka ee lagu yaqaan wadaniyada ee la ogyahay inay aqoon u leeyihiin aqoonta ciidanka qaybihiisa kala gedisan talooyina way diiyaa sida loo heli ugu fudud ee ciidan Qaran soomaaliyeed loo dhisikaro
inuu soo dhaweeyaa ganacsatada si loo helo dhaqaale ku dhisan wadaniyad, si loo helo canshuur aruurin ka fog musuq maasuq, ganacsada dawladu saxiib dhaw ka dhigataa.
Markaa Guusha Madaxweyne Farmaajo waxay Ka dhigan tahay Bulshada soomaaliyeed ayaa aamisan in uu fahan san yahay waxa ay bulshadu Doonayso Gaar ahaan Hogaamiye Shacabkiisa Jecel Gaar ahaan Dhalin yarada oo ah Mustaq balka wadankasta .
Falaqeyntan waxaa wada Qoray.
Maxamed Caalim (Finland) Aqoonyahan ka faalooda xaalada siyaasadeed ee soomaaliya iyo Maxamed Dhaaysane (Xaqiiqa Times)
Previous articleErdogan congratulates new Somali president
Next articleCiidamada gaarka ah ee Soomaliya oo la wareegay ammaanka Madaxwaynaha